အကြံပြုချက်များ: Genius Craft ၏ 28 Craft IDEA - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » VIDEOS "အကြံပြုချက်များ: Genius Craft ၏ 28 Craft အမြင်
အကြံပြုချက်များ: Genius Craft ၏ 28 Craft အမြင်
သင့်မူလစာမျက်နှာ FOR SUPER လွယ်ကူ Craft
သင်ကတ်ထူပြားကနေအမျိုးမျိုးသောအလုပ်အကိုင်များလုပျနိုငျကိုသိသလော ငါတို့သည်သင်တို့အောင်မြင်ရန်နိုငျသော DIY စီမံကိန်းများကိုတစ်စူပါအေးစုဆောင်းခြင်းကိုမျှဝေသောကွောငျ့, ကတ်ထူပြားသေတ္တာများများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးမထားပါနဲ့။ စမတ် Be နှင့် laptop မှ, သင်၏အိမ်ပတ်ပတ်လည်အမျိုးမျိုးသောအသေးစားပစ္စည်းရန်, PDAs များအတွက်အထင်ကြီးအလှအပထုတ်ကုန်ဖန်တီးရန်သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးပါ! အဆိုပါအလှကုန်စည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦးဖိနပ် box ကိုဖွင့်။ တစ်ဦး shoebox နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရောင်ကော်ထုပ်စက္ကူကိုယူပါ။ ဒါ့အပြင်စက္ကူတစ်ရှူးသာသနာအောင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။ တစ်ဦးအားသွင်းဘူတာရုံသို့ဟောင်း box ကို iPhone ကိုပြန်သုံးပါ။
အဆိုပါထုံးခေါငျးအုံးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွက်အအေးဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပုံကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ, ကပိုက်ဆံတန်ချိန်သုံးဖြုန်းမယ့်နှစ်ခုစောင်ကိုယူ, သူတို့ကိုလှိမ့်ကာလှပသောထုံးချည်နှောင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ကဲဒါဆိုရင်တော့!
ပူပြင်းတဲ့ကော်ချောင်းကိုနှင့်သင်၏ပျင်းစရာရှပ်အင်္ကျီကိုအလှဆင်။ သေးငယ်တဲ့စက်ဝိုင်းတစ်ချောင်းကိုဖြတ်တဲ့တီရှပ်ပေါ်မှာထားပါ။ နှလုံးကြပါစို့။ ဒါကြောင့်ကော်အရည်ပျော်ကုန်အံ့မှစက္ကန့်အနည်းငယ်ခေပျြမြားစက္ကူနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူနှလုံးဖုံးအုပ်ထားပါ။ စက္ကူ Remove နှင့်အလွှာဖြန်း။ အဆင်သင့်!
ကျနော်တို့ထည်ပေါ်သို့ပုံရိပ်တွေလွှဲပြောင်းရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်! တစ်ဦးအေးမြစိတ်ကြိုက်ခေါင်းအုံး Make! သင်၏အဆွေခင်ပွန်း၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုယူပါက print ထုတ်ခြင်းနှင့်ခြေလှမ်းငါတို့သင်ခန်းစာခြေလှမ်းကိုစောင့်ကြည့်! ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်အလွယ်တကူဖယောင်းတိုင်အပေါ်ပုံရိပ်တွေကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတစ်သျှူးစက္ကူကိုကြိုက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကို print ထုတ်။ ဆီမီး၏ရုပ်ပုံထားပါနဲ့ဖယောင်းစက္ကူနှင့်အတူကိုဖုံးလွှမ်း။ ဖယောင်းစက္ကူအရည်ပျော်ဖို့အစပြုသည်အထိနွေးဖြည်းဖြည်းဆံပင်လေမှုတ်စက်နှင့်အတူပုံနှိပ်။ အဆိုပါဖယောင်းစက္ကူဖယ်ရှားပါ။ အဆင်သင့်!
အဆုံးတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကို Watch နှင့်သင့်အိမ်တွင်းအလှဆင်ဖို့စက္ကူအနုပညာကိုရှာဖွေ!
00: 09 တစ်ခေါင်းအုံးပေါ်ပုံတစ်ပုံကို print ထုတ်လုပ်နည်း
05: 48 အေးမြ DIY နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်
09: 42 ဗဓေလသစ်လက်မှုပညာ ချ.
03: 08 လက်မှုပညာကတ်ထူပြား
07: 19 ခေါင်းအုံးဒိုးနတ် DIY
Facebook က: https://www.facebook.com/5min.crafts/
Instagram ကို: https://www.instagram.com/5.min.crafts/
girly Craft5မိနစ် Subscribe to: https://goo.gl/fWbJqz
လက်မှုပညာ5မိနစ်ကလေးများ Subscribe to: https://goo.gl/PEuLVt
အမည်ခံ5မိနစ်လူ Subscribe to: http://bit.ly/2S69VUG
Youtube ကို၏ကောင်းသောအခြမ်း: https://goo.gl/rQTJZz
ကမ္ဘာတဝှမ်းခဲ့ကြသူ 10 ရည်မှန်းချက်များ Salah - ဗွီဒီယို
GIRL CAMER 279: mireille Pakgne စီးရီးအပေါ်ခွေးရူးပြန်ရောဂါဆန့်ကျင် Corat - ဗီဒီယိုကိုဤနေရာတွင် IS